Codsiga - Zhejiang Estar Farsamada Co., Ltd
taam jaraa'id darafta
ogaanshaha darafta Roll
dhaqe riixdaan iyo shirkii slide
JIRADA jediyay dhiman TAARIKADA
Dhiman ridaya dhiman
Dhiman ridaya dhiman & qaybaha
EE ALTERNATOR Shell
EE FLANGE baabuurta
EE GAS baabuurta
EE DSHISKA koronto
EE qalab CAAFIMAAD
EE qaybaha kale
EE BOX REDUCER
TILMAANTA BUSHING & TAARIKADA
PET PREFORM caaryada TAARIKADA
BUSHING caaryada BALAASTIKADA
Garkooda PTFE sita durkiyo loo gashto
BUSHING SALIID SINTERED
SYNCHRONIZER WAC baladweyne
Qaybo GEAR gudbinta
codsiga soo saarka CFB
Codsi gaar ah
soo socda waa qaar ka mid ah codsiyada gaarka ah ee saa'idka CFB
Sababo la xiriira isku darka ee guryaha iyo waxqabadka wax, wax soo saarka CFB ayaa si ballaaran loo isticmaalo, iyo dallacsiiyey badan saa'idka is-cabbeeyo caadiga ah. Qaab dhismeedka dhuuban-deyran, size yar yar, miisaanka iftiin, fududahay in la isticmaalo gacmo EU. Iyada oo ku saleysan guryaha wax of lakabka Duugga u adkaysta of PTFE waxyaabaha ey isku CF dayactirka adag tahay in aan la refueled karaan ama ay adag tahay in dib u shidaal qaadasho, ma sifaynta saliida iyo ka yar jeer sifaynta saliid. Inta lagu jiro isticmaalka, isku dar PTFE foomamka film kala iibsiga ka ilaaliya qodaa grindstone ka qaniinay ah. daryaa PTFE bixiyaan iska caabin aad u fiican Duugga iyo Wehliyaha hoose oo khilaaf, sidoo kale dhexdhexaad elasto-plasticity, taas oo u qaybisay stress oo dhan dusha a xiriir ballaaran, Kuna kordhisaa load waagii awoodda alaabta EU (eeg). Sidaa darteed, wax soo saarka EU ku haboon yihiin qoqobada, Swing, axial saraysa iyo arimo kale.
Codsiyada caadiga ah in industry this ka mid ah:
ceejinta, ayuu kala jejebiyey, baydalka xajin, hab qabsiga muraayad, caleemaha masaxa daaqadda, hab kor u furmo suuqa, farsamo sunroof, joystick, albaabka qufulka albaabka faseexad, hab kursiga tensioning suunka, hab qabsiga kursiga, Carburetor, jirridda, ku taagnaa, horizontal usha iyo madaxa kubad, ceejinta, isteerinka, isteerinka, steel jaalaha ah iyo wixii la mid ah.
mishiinada beeraha iyo mashiinada cuntada
Cagaf, isu geeyo dillaaliinta, balers (hay, caws engegan oo kale, iwm); balers, qalabka processing hilib, dillaaliinta baradho, buufiyeyaasha, qalajiya hadhuudh, dhirta laga beerto, qalabka yaynana kolna, iwm
mashiinada dhismaha, mishiinada gaadiidka
cagafcagaf Haydarooliga, wiishashka Haydarooliga, ooyinka la taaban karo, baabuurta fargeeto wiishka, dhululubada Haydarooliga, tensioners suunka, wiishashka, baabuur hoobiye, forklift sariirtaada, wiishashka pneumatic, cagafcagafyadu, escalators, qalabka galiyey Liquid, dhinaca loading iyo mashiinada dajinta.
Qalabka guriga, qalabka ganacsiga, qalabka isbitaalka
qaboojiyaha, nadiifiyo vacuum, dhaqa, makiinadaha harqaanka, Makiinadaha dhar dhaqidda, qaboojiyaha, Footokoopiyaal, madbacadaha, scanners, nidaamyada mail processing, qalabka kala sooca warqad, qalabka ilkaha, qalabka X-ray, miisaska hawlgalka iyo wixii la mid.
Baaskiil, mootooyin, qalab, uumi Machine dun, reciprocating miinshaar, mashiinka Gerong, mashiinka dharka, mashiinka tolida, mashiinka button, nidaamka baakooyinka, qodbay qalabka mashiinada, qalabka wax soo saarka galaas.
CFB darafta waxaa sida caadiga ah lagu talinayaa in hawlgalka go'aysa iyo deegaanka sifaynta xuduudda, gaar ahaan design dhaleen darafta godka, u wanaagsan jeer laga gami ma joogto ah oo soo noqnoqda ama, laakiin xaaladaha non-cabbeeyo, CFB Dhererka darafta waxay ku xiran tahay dhalista, xawaaraha dusha , heerkulka daarmayaay'e gaar ah iyo isdhexgalka kale. Isla mar ahaantaana, dusha hoose oo daaha caag darafta waa laga tegi karaa nidaamka wax taaj oo kale ah ka hor la xirrira, waxaa la samayn karo godka kursiga in size a shirka ka fiican.
bambooyin Gear, bambooyin, bambooyin qalab, filtarka kubada, filtarka balanbaalis, filtarka isku qasin, filtarka gacanta, reciprocating kombaresarada hawada, biriiga Haydarooliga, komberesarrada culus, dhululubada Haydarooliga.
Cinwaanka: Zhejiang Jiashan Weitang Industrial Park Changsheng Road 9-ka
saa'idka saraysa inta badan waa is-lubrica ...
sifooyinka dhalista Oil-free
saa'idka saraysa waa lacag bixisid si aad fiiro ...
Exhibition International Waayo Construction ...